Trailergbọ ala izizi nke Osimiri anwụnta otu ọnwa mgbe mmalite ya | Esi m mac
N'afọ gara aga ozi ọma pụtara na ihe nkiri n'okpuru aha nke anwụnta anwụ ọ na-aga ịghọ usoro n'ime Apple TV + gburugburu ebe obibi. Anyị maara na isi mbụ ga-ewepụta na njedebe nke ọnwa a na Apple chọrọ ka anyị meghee ọnụ anyị ihe ụgbọala na-adọkpụ nke di ugbua site na nke gi Youtube ọwa.
Osimiri anwụnta, ihe nkiri akụkọ ifo nke Harrison Ford site na ngwụsị 80s, ga-adị ndụ ọzọ mana oge a n'usoro ụdị. Ọ ga-adị na Apple Tv + ọ ga-agụ con Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, na Gabriel Bateman. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịhụrịrị ụgbọala na-adọkpụ nke usoro isiokwu a na ọ bụrụ na anyị ekwe ka onwe anyị buru ihe oyiyi mbụ a, ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ.
Njem a dị egwu na-enye anyị njem dị egwu nke onye na-eche echiche dị egwu na onye na-enweghị atụ, afọ juru ndị ahịa nke ọha mmadụ nke oge a, Allie Fox (nke Justin Theroux na-akpọ), onye na-efopụ ezinụlọ ya na Mexico mgbe ha hụrụ onwe ha na mberede na-agba ọsọ site n'aka gọọmentị US. Arụmụka nke na-adịgide na-asọpụrụ mbipụta nke Paul Theroux nke dị afọ iri anọ ugbu a, mana ka anyị si hụ na ọ ka bụ ihe ejiji.
Na-esote Eprel 30 Nwere oge atọrọ na Apple TV + iji nwee ike ịhụ mmalite nke usoro. Ma ugbu a, i nwere ike imeghe ọnụ gị na trailer. Nkowa di nkpa nke ihe na echere ayi na otu ihe si di ka ndu di nfe ma di nwayo di iche.
Naanị na nkeji abụọ na ọkara, enwere ike ikwu ntakịrị mana Apple jisiri ike were oge a mepụta ezigbo ọkụ nke ga-adọta ndị na-ekiri ya n'akụkụ mmiri anwụnta. Chekwa ụbọchị, Eprel 2, premiere nke usoro ohuru na Apple TV +
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Trailergbọ ala izizi nke Osimiri anwụnta otu ọnwa mgbe mmalite ya